Cnc machining services, CNC ngomshini Izingxenye, Precision machining - Weldo
CNC zethusi okuyingxenye
Izingxenye ze-CNC zensimbi ezingenasici
I-Dong Guan Weldo Precision Machining Co., Ltd ingumkhiqizi oqinisekisiwe we-ISO 9001, yasungulwa ngo-2008. Indawo yokukhiqiza itholakala edolobheni lezimboni elidumile emhlabeni-i-DongGuan. Singabantu abaqeqeshiwe ku-NC & CNC service machining and service assemling for OEM and ODM parts. Izinhlobo zifaka phakathi ukujika, ukugaya, ukugaya, ukugxusha, ukugoba, ukushisela, ukufeza, ukumba nokuthayipha. Indawo yokukhiqiza engaphezu kwamamitha ayisikwele angama-6,000 isetshenziswa ngokukhishwa okuphezulu kokukhipha ukukhiqiza izingxenye ezifaneleke kahle zezinhlobo ezahlukahlukene zezimboni njenge-medi ...
Ikhasimende lethu lise-Asia, eNyakatho Melika naseYurophu, sizibophezele ekukhiqizeni nasekuhlinzekeni izingxenye zokwenza imishini esezingeni eliphakeme ngokunemba nezingxenye kumakhasimende emhlabeni jikelele. Imikhiqizo isetshenziswa embonini yezokwelapha, imboni ye-semiconductor, imboni yemishini njalonjalo.
Sineqembu lobuchwepheshe lobunjiniyela kanye nochwepheshe abanolwazi, ngawo wonke amandla nomdlandla wethu, sigxile ekunikezeni amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu futhi esezingeni eliphezulu ukuze abe ngumlingani wakho othembeke kakhulu.
I-Dongguan Weldo Precision Machining Co., Ltd. ingumkhiqizi oqinisekisiwe we-ISO 9001.
Isisekelo sokukhiqiza egameni elidumile ledolobha lezimboni-iDongguan. Inkampani yethu inamamitha ayisikwele angaphezu kwezi-6,000 wezikhala zefektri, egxile ekunikezeni izinsizakalo zemishini ngokunemba nezinsizakalo zomhlangano zezingxenye ze-OEM ne-ODM.
Ngabe ufuna ukuphakamisa imibuzo yakho ngathi?
Noma yiziphi izifundo zethu zingakusiza wenze lokhu!
I-Dong Guan Weldo Precision Machining Co., ltd, okungumkhiqizi onguchwepheshe bezingxenye zemishini enesipiliyoni sokukhiqiza nokuklama.
I-Western Union, Imali, i-Gram, i-Escrow noma i-Paypal T / T, ukudluliswa kwebhange. (50% njengediphozi ngemuva kokuqinisekisa inkokhelo, kanye ne-50% njengebhalansi ngaphambi kokuthumela.
UmkhiqizoImikhiqizo yokudumisa edumile
Izingxenye ze-Precision Custom Cnc Machining Aluminium Aluminium Parts Metal Machine
CNC Engagqwali Ingxenye / Engagqwali Ingxenye / Engagqwali Izingxenye elingasebenzi
Ukwenza ngokwezifiso-umshini-Brass-Machining-CNC-Lathe-Precision-Machining-Turning-Parts- (2)
Indawo Yokufaka Umkhiqizo
Izinto Zokusebenza Ezijwayelekile
IzindabaImikhiqizo yokudumisa edumile
Izesekeli zomshini wamaski bamba kagesi nge-pe yayo ...
Izici zokusebenza kanye nenqubo yokusebenza ye-clutch ye-electromagnetic yokufinyelela ...
Izici Namathemba Wokunemba Imishini Izingxenye Proce ...
Imboni yokwenza imishini ngokunembile ibilokhu isebenza kanzima, ibiza imali enkulu, futhi i-techno ...
Yiziphi izingxenye ezifanele ukucubungula kahle
Siyazi ukuthi ngokunemba machining inezidingo eziphezulu ngokunemba, ngokunemba machining ine goo ...
Izici zokusebenza kanye nenqubo yokusebenza ye-clutch ye-electromagnetic yezesekeli zomshini wemaski. I-clu kagesi ...
Imboni yokwenza imishini ngokunembile ibilokhu iyimboni edinga abasebenzi abaningi, edinga imali enkulu, kanye nobuchwepheshe. Imboni ine-t ephezulu ...
Siyazi ukuthi ngokunemba machining inezidingo eziphezulu ngokunemba, ngokunemba machining has rigidity okuhle, high yokukhiqiza ngokunemba, futhi accu ...
Ngemuva kokuthengiswaInsizakalo yekilasi lokuqala emva kokuthengisa
Besingumhlinzeki othembekile wokukhiqiza kulo mkhakha iminyaka engaphezu kwengu-12, sizakhele igama elihle kakhulu kwikhwalithi, ukuhlinzekwa kwamakhasimende nokusebenzisa imishini yobuciko
nikela ngezinsizakalo zokufaka amasethi wemikhiqizo ephelele
Ufuna ukwazi okwengeziwe?
Cha. 16, iDalong Road, iShigu Industrial Zone, isifunda saseNancheng, iDongguan City, iSifundazwe saseGuangdong, China
Silandele kulezi zinethiwekhi zokuxhumana nabantu.
© © Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe.